Safidy ara-barotra azo ekena ve ny faneken'ny olo-malaza? | Martech Zone
Celebrity Endorsement dia hita ho safidy mety ho an'ny orinasa hampiroborobo ny vokatra vokariny. Orinasa maro no mino fa ny fananany vokatra mifandraika amina olo-malaza malaza dia hanampy amin'ny famoahana ny varotra. Ireo mpanjifa dia toa tsy matoky ny fitaomany amin'ny 51% milaza fa ny faneken'ny olo-malaza dia tsy misy dikany firy amin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo mividy.
Na dia azo refesina aza ny ROI amin'ny teknika marketing maro - ROI amin'ny fanohanan'ny olo-malaza mety ho sarotra kokoa ny manisa. Betsaka ny tombontsoa mety ho azo avy amin'ny faneken'ny olo-malaza fa misy ihany koa ny fandrika mety hasiana fanaraha-maso tsara.
Ireo fandrika ireo dia noforonina rehefa miankina amin'ny olo-malaza iray fotsiny ianao hampiroborobo ny vokatrao. Ny lazan'ny orinasanao dia mety eo am-pelatanan'ny olona iray izay afaka miova ny sariny mandritra ny alina vokatry ny raharaha ratsy nataon'ny olo-malaza sasany. Tena mendrika ny hihazakazaka io risika io ve?
Vokatr'izany dia miovaova be ny fahombiazan'ny fanohanan'ny olo-malaza ary tena tranga iray ny an'ny sasany miasa ary ny sasany kosa tsy. Ny maha-zava-dehibe ny fisafidianana olo-malaza sahaza azy no laharam-pahamehana amin'ny fanalefahana ny loza mety hitranga amin'ny besinimaro. Tsara hotadidina fa ny risika mifandraika amin'ny faneken'ny olo-malaza dia tsy azo foanana tanteraka, ary ny fiatrehana ny fiatraikany ratsy amin'ny faneken'ny olo-malaza dia mila karakaraina tsara.
Ity infographic avy amin'ny Sonia A Rama Toronto manome anao ny antontan'isa momba ny maha-mazoto ny fanohanan'ny olo-malaza, ary koa ireo tantara ao ambadiky ny faneken'ny olo-malaza mahomby sy tsy nahomby nandritra ny taona maro.
Tags: Beyoncelefona britneycatherine zeta jonessary malaza an'ny fankalazanavalisoa fankatoavan'ny olo-malazarisika fanamafisana ny olo-malazafaneken'ny olo-malazadavid beckhamDonald trumpellen degenereskardashiansnikole kidmanNielsenoj simpsonRihannasignaramasignoramaToronto